I-Dot kuDot Image Unicorn | Amakhasi ombala wamahhala wokulanda
I-Dot ekucaciseni isithombe esingenasici
Amakhasi ombala ayingqayizivele enkulu yabantwana beminyaka yonke. Ewebhusayithi yethu uzothola izisusa eziningi ezihlokweni ezahlukene. Khombisa izithombe zephuzu uhambe kancane.
Khomba kuphuzu isithombe - unicorn
Emfanekisweni wephuzu-kuya-phuzu, ingane ixhuma amaphoyinti ambalwa - ngendlela efanele - ngepeni. Ekugcineni, umuntu owaziwayo noma isidalwa sibheka. Isithombe esiphelele singabuye sibekwe "njengomvuzo". Ukuchofoza esithombeni kuvula ithempulethi kufomethi ye-PDF.
Khomba kuphuzu le-template unicorn njenge-graphic open
Sicela uxhumane nathiuma ufuna isithombe esikhethekile kakhulu sombala ngesisusa esikhethekile kakhulu. Siphinde sijabule ukwakha ishidi lakho lokubala lombala ngokusho kwakho okuvela esithombeni.
Khombisa ithwala lesithombe sephoyinti
Phakamisa iphuzu lesithombe sehlengethwa
Khomba ikati lesithombe sephoyinti
Khomba inkomo yesithombe sephoyinti
Khombisa ihhashi lesithombe sephoyinti
Izindwangu - Zingaki izinxantathu zikhona kulokhu ...
Khomba izithombe ezithombeni zezingane
Khombisa i-butterfly iphuzu
Khomba iphuzu lembuzi yesifanekiso
Indlela yokudweba i-unicorn